Sharci darro lagu tilmaamay in Madaxweyne Najaad qabto xilka wasaaradda Patroolka – SBC
Sharci darro lagu tilmaamay in Madaxweyne Najaad qabto xilka wasaaradda Patroolka
Tehran:- wakaaladda wararka rasmiga dalka iran oo soo xiganayasa afhayeenka golaha ilaalada dustuurka ninka lagu magacaabo Cabbaas Cali ayaa sheegtay in iyadoo lagu dhaqmayo qodobada dustuurka dalka Iran aysan suurtagal ahayn in madaxweyne Najaad uu si shakhsi ahaaneed u qabto jago wasaaradeed.
Axmedi Najaad ayaa shaaca ka qaaday 15 bisha may in uu qaatay go’aan ku aadan in uu jagada wasaaradda Patroolka uu u sii hayo si KMG kadib markii uu xilka ka qaaday wasiirkii hore si uu isku shaandhayn ugu sameeyo qaab dhismeedka wasaaradda iyadoo uu ku talo jiro in wasaaaradda Patroolka iyo wasaaradda tamarta uu kawada dhigo hal wasaarad.
Qaraarkan ayaa waxaa ka hor yimid mucaaradka Axmedi Najaad ee ku jira xisbiga muxaafidka ee gacanta ku haya inta badan hay’adaha Iran, islamarkaana waxa ay ku tilmaameen in ay tahay wax aan sharci ahayn.
Mr. Cabaas ayaa carabaabay in goluhu uu qaatay qaraar kama dambeys ah oo ah in madaxweynuhu xaq u leeyahay magacaabidda wasiiro KMG iyadoo uusan amar ka qaadan golaha wadatashiga muddo 3 bilood kadib marka xilka laga xayuubiyo wasiirka, balse suurtagal aysan ahayn in madaxweyne uu qabto xilka wasiir shaqada laga eryey.
Faadumo Buudaagi oo ah kuxigeenka madaxweynaha arrimaha qaanuunka ayaa sheegtay in madaxweynuhu uu eegay dustuurka waxa ku saabsan maamulidda wasaarad , waxayna intaas ku dartay in gabagabadii kulanka xukuumadda la isku raacay in madaxweynuhu yahay wasiirka Patroolka si KMG.
Buudaagi ayaa carabaabtay in qaraarkan uu saameyn ku yeeshay saadaasha in madaxweynuhu ka qeyb geli doono kulanka wasiirada ururka dowladaha dhoofiya shidaalka ee kadhacaya 8 June magaalada Vienna xilli la filayo in Iran ay qabato madaxtinimada OPEC markii ugu horeysan tan iyo kacaankii Islaamiga ee ka curtay dalka Iran sanaddii 1979.